Khilaaf salka ku haya Al-Shabaab oo ka dhex qarxay culimada Somaliland | Onkod Radio
Muqdisho (Onkod Radio) – Waxaa aad usii xoogeystay khilaaf xoogan oo u dhexeeya culimada Ictisaamka iyo Salafiyiinta ee Somaliland, kadib markii uu Sheekh Barbaraawi sheegay in uu xiriir ka dhexeeyo Ictisaam iyo Al-Shabaab.
Sheekh Barbaraawi oo kamid ah culimada Salafiyiinta ayaa khudbad uu jeediyay ku eedeyay Ictisaam inay kamid ahaayeen ragaii aasaasay kooxda ka dagaalanta Soomaaliya ee Al-Shabaab.
“Ilmo-galeenka Ictisaam ayuu Shabaab ka soo baxay. Ragga asaasay Shabaab waxa ay kamid ahaayeen Ictisaam. Isku fikir na way ahaayeen. Inta ay Shabaabku yiraahdaan bay oran jireen,” ayuu yiri Sheekh Barbaraawi.
Waxa uu tilmaamay in Ictisaam ay ku eedeyn jireen Salafiyiinta uu kamid yahay inay u shaqeeyaan dadka aan Islaamka ahayn, isla markaana ay jihaadka diidan yihiin, arrintaas oo uu hadda caan ku yahay ururka Al-Shabaab.
Hadalka kasoo yeeray Sheekh Barbaraawi ayaa waxa ka carooday culimada Ictisaam ee Somaliland, iyaga oo beeniyay eedeyntaas, waxayna dacwad ka dhan ah u gudbiyeen Wasaarada Diinta iyo Awqaafta Somaliland.
“Waxaan bulshada u cadeyneynaa in aan beri ka nahay eeda iyo dhaleecaynta uu wadaadkaas dusha nooga tuuray ee ah in aanu jirin farqi noo dhexeeya anaga iyo Al-Shabaab,” ayuu yiri Sheekh Mustafe Aadan Maxamed oo kamid ah culimada Ictisaam ee Somaliland.
Sheekh Barbaraawi ayaa dhankiisa markale sheegay in looga yeeray wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Somaliland, islamarkaana uu hayo caddeymaha eedeynta uu u jeediyay Ictisaam.
“Waxaan diyaar u ahay in aan gole loo dhan yahay ku soo bandhigo doodayda ku aaddan arrinkaas,” ayuu yiri Sheekh Barbaraawi oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa.
Culimada Salafiyiinta iyo Ictisaamka ayaa ah kuwo si weyn ugu xoogan gudaha Somaliland.
Si kastaba, Salafiyiinta ayaa aaminsan in dagaalada Muslimiinta dhexdooda ah ay yihiin kuwo “fidno” ah oo ay dembi tahay in dhinac lala safto, midaasi oo keentay in Al-Shabaab iyo ururada la fikirka ah ay u arkaan Salafiyiinta kuwo diidan waxay u arkaan jihaadka.